DataNumen: Refund Policy
musha dzosera Policy
Isu tine chivimbo chakasimba nehunhu hwezvigadzirwa zvedu nemasevhisi zvekuti isu tinopa zvinotevera zvitatu zvivimbiso kwauri mukati memazuva makumi matatu ekutenga kwako, kuve nechokwadi kuti wagutsikana ne30%.
Tinopa iyo yakanakisisa data kudzoreredza zvigadzirwa uye masevhisi munyika. Ndosaka takagadzira yedu Yakanakisa Kudzorera Guarantee ™ - Isu tinovimbisa zvigadzirwa zvedu nemasevhisi anozowana yakanyanya data kubva kune yako yakanganisa faira, system kana Hardware. Kana iwe ukafanira kuwana chishandiso icho chinogona kudzosa yakawanda data kupfuura yedu, isu tinodzoreredza odha yako zvizere!
Iyi vimbiso inosimbisa chinzvimbo chedu chehutungamiriri uye kuzvipira kune vatengi vedu. Isu tiri vekutanga uye vega data rekudzosa kambani yekupa yakadaro-yekudzoserwa garandi, ichiratidza kuvimba kwakanyanya muzvigadzirwa zvedu.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama, ndapota tinya pano.
Edza Usati Watenga Guarantee
Zvese zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa pane yekuyedza-pamberi-kutenga nzira. Ndokunge, iwe unogona kudhawunirodha uye kushandisa iyo demo vhezheni kuti utore yako yakaora faira, mahara. Kana iyo faira ikawanikwazve, iyo demo vhezheni inoratidza kutarisisa kwezvakadzorerwa zvirimo, kana kuburitsa yekuratidzira faira, kana ese ari maviri. Zvichienderana nemhedzisiro yedemo vhezheni, iwe unogona kuziva kana iyo data iwe yaunoda inogona kudzorerwa kana kwete.
Zvino, mushure mekuti iwe utenge iyo izere vhezheni, kana iyo faira yakagadziriswa neiyo yakazara vhezheni haina kufanana neye demo vhezheni mhedzisiro, isu tinodzorera odha yako.
100% Kugutsikana Guarantee
Kunyangwe zvivimbiso zviviri zviri pamusoro izvi zvichizogara zvichiona kuti iwe unowana zvakanakisa uye most zvinogutsa mhedzisiro, tinoenda imwe nhanho kumberi, nekupa 100% kugutsikana garandi. Kana paine chero chikonzero, hauna kugutsikana nechigadzirwa kana sevhisi yawakatenga, saka unogona kuwana mari yakazara.
Ongorora: Unofanirwa kupa chikonzero chekudzoserwa mune ruzivo. Kana zvichidikanwa, iyo yakashata faira yakashata inodikanwawo kuitira ongororo chete. Faira rako uye data zvichachengetwa zvakavanzika zana. Ona yedu zvakavanzika urongwa kune rumwe ruzivo. Kana zvichidikanwa, isu tichasaina NDA newe kuvimbisa izvi.